on November 02, 2016 Related - Hay Man Thazin Overseas Burmese
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ကို ဟောလိုဝင်း ပွဲတော် နေ့လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒီနှစ် မှာ တော့ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့က တနင်္လာ နေ့ဖြစ်တာ ကြောင့် ကျောင်း တွေ အလုပ်တွေ မှာ တော်တော် များ များ ဟာ သူတို့ နှစ်သက်တဲ့ ၀တ်စုံတွေ ၀တ်ပြီး ကျောင်းသွား အလုပ်သွားကြတယ်။ ကျောင်းတွေ အလုပ်တွေ မှာ လည်း ဟောလိုဝင်း ပါတီ တွေ ကို ပျော်ပျော် ပါးပါး လုပ်ကြတယ်။
ဟောလိုဝင်းနားနီး ပြီ ဆို စတိုးဆိုင်တွေ ဈေးတွေ မှာ ရွှေဖရုံ သီး အသေး အလတ် အကြီး ဆိုဒ်စုံ ရောင်းကြတယ်။ သူတို့ တွေ ကို အိမ်တွေ ရှေ့မှာ ချထား ပြီး ဟောလိုဝင်း ကို ကြိူကြတာကိုး ။
ဒီလိုပဲ ဟောလိုဝင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝတ်စုံတွေ အမျာကြီး ကို စတိုးဆိုင်တွေမှာ ရောင်းကြတယ်။ စုံးမ ..သူရဲ စတဲ့ ဝတ်စုံ က စလို့စင်ဒရဲ လား ၀တ်စုံ. စူပါမန်း.. ဘက်မန်း.. သူနာပြု..ဆရာဝန်.. မီးသတ်.. စတဲ့အသင့်ချုပ်ပြီးသား အမျိုးမျိူး အစုံ စုံ ကို ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေး ၀ယ်နိုင်သလို .. ကိုယ့် ပုံစံ စတိုင်နဲ့ ကိုယ့်ဖာသာ ဒီဇိုင်းထွင်ပြီး ချုပ်တဲ့ သူ တွေ လည်း ရှိတယ်။ ဟိုးတုန်း က တော့ဝတ်စုံတွေ ဟာ တယောက်နဲ့တယောက် ပိုပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း တွေ နဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ၀တ်ကြဆင်ကြတယ်။ ကြောက်စရာ့ မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်နဲ့ ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ဒီဖက် နှစ်တွေ မှာ အမုန်းတရားတွေ အကြမ်းဖက် တာတွေ ကြိ့ ကြား ကြို့ ကြား တွေ ဖြစ်နေတော့.. ဟောလိုဝင်း မတိုင်မီမှာပဲ.. တချို့စတိုးဆိုင်တွေဟာ ..မျက်နှာဖုံး နဲ့ဝတ်စုံတွေ မရောင်းဖို့သူတို့ ဖာသာ သူတို့ တွေ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆို တဲ့အကြောင်း သတင်းထဲ မှာ တွေ့ လိုက်ရသေးတယ်။
အိမ်တွေမှာလည်း ဟောလိုဝင်း အပြင်အဆင်တွေအတွက် တနှစ်နဲ့ တနှစ် မရိုးရအောင်.. အမျိုးမျိုး အဖုံုံ ဖုံ ပြင်ကြ ဆင်ကြတယ်။ ပင့်ကူအိမ်တွေ.. အရိုးခြောက်တွေ.. ကြောက်စရာ့အရုပ်တွေ.. တို့ လို တွဲလောင်း နဲ့ .. တချို့အိမ် တွေ မှာ ဆုို ရောင်စုံ မီးတွေ ထိန်ထိန်ထွန်းပြီး ဟောလိုဝင်း ကို ကြို ကြတယ်။ ကိုယ်တွေ နဲ့ကပ်ရက် က အိမ်မှာ ဆို သူ့ အိမ်ရှေ့ခြံ ကို သချိင်္ုင်း ကြီး လို ပြင်ထားတယ်။ တအိမ်ကျော် ကလည်း သရဲ ခြောက်တဲ့ အိမ် ပုံစံ ပြင်ထားပြီး လာတဲ့သူတွေ ကို စိတ်ဝင်စား အောင် လုပ်ထားတယ်။
ကိုယ်တွေ က တော့တခြားသူတွေ လို ထွေထွေထူးထူး ပြင်ဆင်မထားပါဘူး။ ညဖက်မှာ ၀တ်စုံ အမျိုး မျို နဲ့လာကြမဲ့ဟောလိုဝင်း ချစ်သူတွေ အတွက်.. ကြို ဆို ပါတယ်.. အိမ်ကိုလာပြီး Trick or Treat လာပြီး တောင်းလှည့် ပါ....ဆိုတာ သိအောင်.. လျှပ်စစ်ရွှေဖရုံသီး လေးထွန်း.. အိမ်ရှေ့မီးကို ဖွင့်ပြီး စောင့် နေရုံ ပါပဲ။
ကိုယ်တို့လမ်းလေး မှာ တချို့ အိမ်တွေ ဟာ ဟောလိုဝင်း အတွက် တကယ့် ကို စိတ်ပါလက်ပါ ပြင်ဆင်ကြတာမို့အဲဒီနေ့ဆို ကိုယ် တို့ လမ်းဟာ တကယ့် ကို စည်ကားပါတယ်။ ည ၆နာရီ ခွဲ လောက်က စပြီး ကလေး အရွယ်စုံ ဟာ သူတို့ ကြိုက်တဲ့ဝတ်စုံလေးတွေ ၀တ်ပြီး တအိမ် ၀င် တအိမ်ထွက် Trick or Treat မေးကြ.. အိမ်ရှင် တွေ က လဲ Treat လို့ ပြောပြီး သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ ကို ပေးကြပေါ့။ တော်တော် များများ က ကိုယ်တွေ လိုပဲ သကြားလုံး မျိုးစုံ.. ကွတ်ကီး နဲ့ချောကလက်မျိုးစုံ ကို ပါလာတဲ့ပုံးလေးတွေ..အိတ်လေးတွေ ထဲ ထည့်ပေးကြတယ်။ တချို့ တွေ က တော့တခြား လက်ဆောင်လေးတွေ.. ကလေး တွေ အကြိုက် Sticker လေးတွေ.. အထွေအထူးလေးတွေကို ထုပ်ပိုးပြီး ပေးလေ့ရှိတယ်။
ကိုယ်တွေ ဖက်မှာ လာလေ့ ရှိတဲ့ သူ တွေ ဟာ ကလေးတွေ များပါတယ်။ ၂ နှစ် ၃နှစ် က စလို့မူကြို မူလတန်း အရွယ်တွေ များပါတယ် ။ သူတို့ တွေ ရဲ့မိဖ တွေ အဖိုးအဖွားတွေ ကြီးဒေါ်တွေ ဖြစ်ဟန် တူတဲ့လူကြီးတွေ ဟာ ခြံဝ တွေ မှာ စောင့် ပြီး သူတို့ ကလေး တွေ ရဲ့ Trick or Treat တောင်းတာ ကို စောင့် ပေးကြတယ်။ ပြီးရင် Thank you.. Happy Halloween လို့ ကလေးတွေက အိမ်ရှင်တွေကို ပြောဖို့ခပ်လှမ်းလှမ်း က နေ လှမ်းသတိပေး သင်ပေးကြတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ခြံထိပ်ကနေ သူတို့ ကလေးတွေ အတွက် Thank You လို့ လှမ်းပြောကြတယ်။
တနှစ်မှာ ဒီတရက်ဟာ ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့ သူတွေ ဆီကနေ ပျော်ပျော်ပါးပါး တောင်းလို့ ရတဲ့ နေ့ ဖြစ်သလို ပေးတဲ့ သူတွေ ကလည်း ကိုယ်နဲ့ တခါမှ မသိဖူး မမြင်ဖူး တဲ့ သူတွေ ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေးကြတဲ့ နေ့ လေးတနေ့လည်းဖြစ်တယ်။ အကောင်းနဲ့ အဆိုးဟာ ဒွန်တွဲ နေသလို ပဲ.. ဒီလို နေ့ တွေ မှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒုစရိုက်တွေ လုပ်တဲ့သူတွေ လည်း ရှိနေတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ သတိတရားတွေ နဲ့ဒီဓလေ့ ကို လက်ဆင့် ကမ်းပြီး တနှစ်ပြီး တနှစ် ဆင်နွဲ နေဆဲပါပဲ။
ကလေးတွေ အတွက်တော့ဟောလိုဝင်းဟာပျော်စရာပေါ့။။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ဝတ်စုံ လေး တွေ ၀တ်.. ညဖက်ရောက် ရင် တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက်.. Trick or Treat လုပ်ပြီး ..ရလာတဲ့ သကြားလုံးတွေ ကွတ်ကီးတွေ ချောကလက်တွေ.. လက်ဆောင်လေးတွေ.. တပွေ့ တပိုက်နဲ့.. အိမ်ရောက် ရင်သူတို့ ရလာတာလေးတွေ တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နဲ့ ပေါ့။
ကိုယ်တွေ အတွက်ကောလို့ တွေးလိုက်မိတော့ .. ကလေးတွေလုို ကိုယ်က Trick or Treat မလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့နှစ်တိုင်း ၀တ်စုံအမျိုး မျိုး နဲ့ လာ တဲ့ အရွယ်စုံ ကလေးတွေ အတွက်.. သကြားလုံးမျိုးစုံ ကို တောင်းကြီးထဲ အပြည့်ထည့် ပြီး ..လာသမျှ တွေ ကို Treat..Treat လို့ ပြောပြီး ပေးရတာ.. ပျော်စရာ ဟောလိုဝင်း နေ့ လေး ဖြစ်ပါစေ..လို့ ပြန်နှုတ်ဆက်ရတာ .. ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို ချမ်းမြေ့ စေတယ်။
ဒီလို အချိန်မှာ ကိုယ်တွေ ဖက်မှာ နွေကုန်ပြီး ဆောင်းဝင်စပြုပြီပေါ့။ နွေ မှာ အားပါးတရ မြင်ရတဲ့နေရဲ့အလင်းရောင် ကို ဒီအချိန်မှာ တိုရေရှားရေ ပဲမြင်ရတော့တယ်။ မနက်ဆို လည်း နောက်ကျ မှ နေ ကို မြင် ရ တော့ သလို ညနေ ဆိုလည်း တနေ့ ထက်တနေ့စော စော ပြီး နေ၀င် သွားတော့ တနေ့ ထက် တနေ့အမှောင်ဟာ စော စော ပြီး ရောက် လာတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် ရာသီဥတု ကလည်း တဖြည်းဖြည်း အပူဓါတ်တွေ နဲ နဲ လာပြီး အအေး ဓါတ်တွေ က ပိုပို ကဲလာနေတယ်။
လူစိတ် သဘာဝ ဟာ လည်း ဥတုရာသီ ကို အမှီပြုတယ် ထင်ပါရဲ့ ။ အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်ပြီး အမှီပြုပမာဏ ဟာ တိုက်ရိုက်အချိုး ကျတယ်ထင်ပါ့ ။ ရာသီဥတု ကြည်လင်ရင်.. စိတ်ကလေးဟာ ရွှင်ပြ ဖို့လွယ်တယ်။ ရာသီ က မုန်မှိုင်း..မိုး က တစိမ့်စိမ့်.. အအေးက ကဲ ဆိုရင်တော့ .. စိတ် ကလေး ဟာ ဥတုရာသီ လိုပဲ မှုန်တုန်တုန် မှိုင်းတိုင်းတိုင်း ဖြစ်ချင်သလိုသလို နဲ့.. ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ဒီလို ဟောလိုဝင်း ပွဲတော် ကျင်းပတာဟာ.. လကွယ်ည မှောက်မိုက်နေတဲ့ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေ ကို ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် မြင်လိုက်ရသလို..မှုန်မှိုင်း ချင်နေတဲ့စိတ် လေး ကို လည်း အပျော်ဓါတ်လေး ပက်လိုက်သလို ခံစားရပါတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ အလုံးစုံ ပြည့်စုံနိုင်ဖို့ ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ တရားမျှတလို မှု့နဲ့မတရားအနိုင်ကျင့်လိုမှု့ .. ငြိမ်းချမ်းလိုမှု့နဲ့အကြမ်းဖက်လိုမှု့ ..ပျော်ရွှင်နုးညံ့ လိုမှု့ နဲ့နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းလိုမှု့စတဲ့ ဆန့်ကျင် ဖက်တွေဟာ အမြဲလိုလို.. စီးချင်းထိုးနေသလိုပါပဲ.. ဒီလို ဟောလိုဝင်းပွဲတော်မှာလည်း ရုပ်ဆိုး အကျဉ်းတန်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ က လဲ ကြို့ ကြား ရှိနေတာပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကို ဆင်ခြင်သတိနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ ပွဲတော် ပုံရိပ်ကလေး ဆက်ဆက်ပြီး ဖြစ်နေဖို့ကို မျိုးဆက်တွေ တဆက်ပြီး တဆက် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနေတယ်လို့ကိုယ့်စိတ်ထဲ မြင်မိခံစားမိသလိုပဲ။ ဒီလို အတွေးကလည်း ဥတုရာသီ နဲ့အပြိုင် မှုန်တုန်တုန် မှိုင်းတိုင်းတိုင်း ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေး ကို အကြည်ဓါတ် ကလေး ပက်လိုက်သလို ကြည်လင် လန်းဆန်းလာသလို ခံစားရမိပါတယ်။
ဟောလိုဝင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်း နောက် ခံ ကို စိတ်ဝင်စားရင်တော့Wiki တို့Google တို့မှာ ရှာလိုက်ရင် တပုံတပင် ကြီး တွေ့ နိုင်တာမို့သူနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပေါ်လာ တဲ့ တွေးမိတွေးရာ ကို ပဲ ရေးလိုက်တာပါ။